Mofon’aina – ZOMA 09 MARTSA 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ZOMA 09 MARTSA 2018
9 martsa 2018
17 Ary ankehitriny, ry rahalahy, fantatro fa tamin’ ny tsi-fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa.18 Fa izany no nahatanterahan’ Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra rahateo, fa hiaretan’ ny Kristiny.19 Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin’ ny fanatrehan’ ny Tompo,20 ary mba hanirahany ny Kristy voatendry ho anareo, dia Jesoa,21 Ilay tsy maintsy horaisin’ ny lanitra mandra-pihavin’ ny andro fampodiana ny zavatra rehetra, izay nampilazain’ Andriamanitra ny mpaminaniny masina hatramin’ ny voalohany indrindra.
ASAN’NY APOSTOLY 3 :17-21
Lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny no tafatsangana noho ny finoana ny Anaran’i Jesoa Kristy(and 16) ary nahagaga ny olona rehetra ny nahita azy . Fa tarihan’ny Tompo ny fijerintsika ka :
1-Ampiany isika handini-tena
Ny finoana ananantsika dia tsy maintsy hita miharihary amin’ny fiainana andavanandro. Ny olona talanjona tamin’ny fahasitranan’ilay nalemy teo aloha iny dia nihazona an’i Petera sy i Jaona (and 11)satria tsy ampy ny finoany an’i Jesoa Kristy na dia tonga tao amin’ny Tempoly aza ireo . Mampandini-tena antsika izany fandrao lasa fahazarana ny miditra ny trano fiangonana ka tsy miandrandra zava-baovao avy amin’ny Tompo. Aoreno mafy ny finoana fa Anarana mahavonjy ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompo. Minoa Azy dia hahita ny Voninahiny .
2-Asainy mibebaka isika
Izay mahatsiaro tena ho malemy no mitady mpampahery, ary izay mahatsapa ny fahotany no mandroso mibebaka. Lalàm-piainana miaraka amin’ny Tompo izany araka ny hamerenan’ny Apostoly eo amin’ny olona ny famonjena nataon’i Jesoa Kristy teto an-tany . Tarihany hibebaka isika mba hamonoany ny fahotantsika rehetra ka hananantsika fifaliana sy fiadanana. Ny Tompontsika no mitady fihavanana amintsika izay tafasaraka noho ny heloka sy ny fahadisoantsika. Fiombonam-piainana ety an-tany ka hatrany an-danitra no kendren’ny Tompo Jesoa ho antsika.
Inona no ataonao rehefa manao fanomanam-panahy ao am-piangonana ?
Safidio Amosa (6) Apokalispsy (19) Asan’ny Apostoly (27) Daniela (6) Deotoronomia (14) Efesiana (12) Eksodosy (13) Estera (3) Ezekiela (3) Ezra (1) Filipiana (4) Fitomaniana (2) Galatiana (6) Genesisy (6) Habakoka (1) Hebreo (7) Hosea (3) I Jaona (10) I Korintiana (10) I Mpanjaka (2) I Petera (8) I Samoela (7) I Tantara (2) I Tesaloniana (5) I Timoty (7) II Korintiana (13) II Mpanjaka (6) II Petera (5) II Samoela (2) II Tantara (6) II Tesaloniana (4) II Timoty (5) Isaia (23) Jakoba (5) Jaona (36) Jeremia (16) Joba (7) Joda (1) Joela (2) Jona (1) Josoa (7) Kolosiana (4) Levitikosy (3) Lioka (35) Malakia (1) Marka (22) Matio (35) Mika (1) Mpitoriteny (2) Mpitsara (2) Nehemia (2) Nomery (4) Ohabolana (10) Romana (14) Salamo (30) Titosy (5) Zakaria (3) Zefania (2)